लेनिन को दाहसंस्कार को सञ्चालन मोड: एक सिंहावलोकन
संसारमा हरेक प्रसिद्ध शहर यस्तो हास्यास्पद मूर्तिपूजक आकर्षण दावा। क्षमा र उहाँको सम्बन्ध बिना पृथ्वीको सतह तल मीटर को एक जोडी को लागि उनलाई हटाउन गरे मृतक गर्न संस्कृतिका र सभ्यताहरू को बहुमत भएपछि। सोभियत राज्य को संस्थापक को Posthumous भाग्य बस यस्तो विचित्र तरिका विकसित गरेको छ - यो मास्को को केन्द्र मा प्रदर्शनमा छ। यसलाई पर्याप्त बस पराउँछु गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई सञ्चालन बाहिर आंकडा को लेनिन दाहसंस्कार को। 1953 मा, यहाँ पनि stalin शरीर गरे। तर सात वर्ष पछि, लेनिन फेरि भव्य अलग्गै मा समाधि मा बाँकी थियो।
ऐतिहासिक स्थल चिन्ह
को समाधि को निर्माण को लेखक एक प्रसिद्ध छ architect Shchusev। यसलाई आफ्नो रचनात्मकता को शिखर को उत्पादन हो विश्वास गर्छन्। तथ्यलाई कसैले वा छैन, तर यो ठाउँ र आज जस्तै यो राजधानी को मुख्य आकर्षण मध्ये एक हो। धेरै पर्यटकहरूले लेनिन दाहसंस्कार रुचि अझै पनि छन् - संचालन, टिकटको मूल्य। केही पनि दाहसंस्कार गर्न भ्रमण यसको अस्तित्व को सबै समय मा नि: शुल्क थियो सिक्न छक्क छन्। भ्रमण गर्न यो मंगलवार, बुधवार, बिहीबार, शनिबार र आइतबार 10 13 घण्टा देखि यो गर्न सक्नुहुन्छ चाहनेहरूको। मार्फत जान तयार एक मेटल डिटेक्टर फ्रेम र सामान मा भारी वस्तुहरु पारित। फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी प्रतिबन्धित।
गत वर्ष, धेरै महिना लागि यो सम्भव छैन यो लेनिन दाहसंस्कार प्राप्त थियो। 2013 मा सञ्चालनको मोड वस्तु अस्थायी रूपमा बहाली लागि बन्द गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा प्रतिष्ठित थियो। यो उद्देश्य लागि समाधि को निर्माण एक ठूलो प्लास्टिक घरको छानो ढाकिएको थियो। हाल, सबै काम सफलतापूर्वक पूरा, र यो सामान्यतया कार्यहरु। निर्माण नै गर्न साथै, पुनर्स्थापना आवधिक र त्यहाँका बासिन्दाहरूले गर्न subjected छ। धेरै सार्वजनिक गर्न प्रस्तुत प्रदर्शनीका प्रामाणिकता को एक उचित पक्कै व्यक्त र Ferris ठूलो नेता को एक मोम नक्कली प्रदर्शन भनेर विश्वास छ।
लेनिन को दाहसंस्कार को सञ्चालन मोड सोभियत युग समयमा
यो स्थान लामो सोभियत युग को मान्छे को लागि एक पंथ छ। यसको महत्त्व लेनिन आफूलाई आफ्नो मनोवृत्ति बिना सबै द्वारा मान्यता प्राप्त छ। यसलाई कम से कम दाहसंस्कार गर्न जीवनकालमा यात्रा मा एक पटक अवश्य छलफल र संसारको proletarian क्रान्तिको को नेता गर्न आदर तिर्न थियो। रातो वर्ग सक्रिय एक bygone युग को मिथक कल्पना प्रविष्ट गर्नुभयो। यसलाई सधैं सोभियत मान्छे दिनहुँ सामना जो संग कुनै पनि लाम को लम्बाइ तुलना गरिएको छ देखि। विशेष मा, बेहोस दबाउन द्वारा सिर्जना गरिएको लेनिन को दाहसंस्कार शासन को काम बारे, अक्सर लेट eighties मा रक्सी को लागि सम्झे लाइनहरू मा। कि वास्तविकता थियो। वोदका लागि लाम लेनिन गर्न आदर भुक्तानी गर्न आउँदै मानिसहरूको उत्तराधिकारी तुलना भएको छ। यस मामला मा व्यक्त धेरै नै विनम्र छैन। तर यो इरादा थियो - मुख्य तीर्थस्थलका राज्य भ्रमण गर्न, यो आवश्यक प्रारम्भिक र शिर Alexandrovsky बगैचा, ठाउँ लिन गर्नुपर्छ जहाँ, र धेरै घण्टा खडा गर्न उठ्नु थियो। जस्तै लेनिन दाहसंस्कार को सञ्चालनको मोड थियो। अब दाहसंस्कार भ्रमण
कसले चे ग्वेभारा थियो
रुडोल्फ Hess र आफ्नो रहस्य
Latifundia - यो के हो? रोम यसको भूमिका के थियो?
एक मानवीय विपत्ति के हो? परिभाषा र उदाहरण
बोरिस Yulin: जीवनी, पुस्तकहरू
"Alvoslim जेनेटिक्स": समीक्षा। वजन लागि औषध
विरोधी सेल्युलाईट जेल-corrector "काला पर्ल": कस्मेटिक्स समीक्षा
थर्मो मल संग एक ढक्कन: प्रकार र विशेषताहरु। छनौट गर्दा के हेर्नु हुन्छ?
Penofol - विशेषताहरु र सामाग्री को गुण
म बालिका लागि बच्चा कस्मेटिक्स चाहिन्छ?
को quails कसरी खाना पकाउनु
केहि क्लिकहरूमा ओपेरामा विज्ञापन अक्षम कसरी गर्ने
सबैभन्दा स्वादिष्ट स्याउ जाम
तपाईंको ब्राउजरमा सूचना - यो के हो?
ब्रेट कलन, अमेरिकी फिल्म अभिनेता
Sergeya Alekseeva पुस्तक: मिथक वा वास्तविकता?